Madaxweyne Laftagareen oo maanta xariga ka jaray xarunta cusub ee maamulka degmada Baydhabo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweyne Laftagareen oo maanta xariga ka jaray xarunta cusub ee maamulka degmada...
Madaxweyne Laftagareen oo maanta xariga ka jaray xarunta cusub ee maamulka degmada Baydhabo
Baydhabo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Laftagareen) ayaa Sabtidii maanta si rasmi ah xarigga uga jaray xarunta cusub ee maamulka degmada Baydhabo ee gobolka Baay, taas oo loo dhisay si casri ah.
Munaasabad lagu qabtay xarunta degmada ayaa waxaa ka qeyb galay madaxweyne Laftagareen, qaar ka mid ah golihiisa wasiirrada, maamulka degmada iyo kan gobolka intaba.
Sidoo kale, waxaa xaflada goobjoog ahaa waxgarad, haween, dhallinyaro, fannaaniin iyo qeybaha kale ee bulshada reer Baydhabo.
Laftagareen oo madasha ka hadlay ayaa ugu horreyn boggaadiyey maamulka magaalada Baydhabo oo horumar ballaarsan ku sameeyey xarunta degmada iyo xafiisyadeeda, si loogu adeego dadweynaha ku dhaqan halkaasi.
Sidoo kale, madaxweyanaha ayaa tilmaama in dib u dhiska casriga ah ee lagu sameeyey goobtan ay qeyb ka tahay horumarka uu hiigsanayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Laftagareen ayaa muddada uu joogo xafiiska ayaa waxa badan ka qabtay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaannada Koonfur Galbeed, isagoona hirgaliyey adeegyo kala duwan oo ay ku diirsadeen dadka ku dhaqan gobollada Shabeelaha Hoose, Baay iyo Bakool.
Maamulka Degmada Baydhabo
Madaxweyne Laftagareen oo xariga ka jaray xarun cusub
Nin lacag ku bixiyey dilka Saaxiibtiisa oo Uur-laheyd